स्वर्गमा वास होस् यम बुद्ध « LiveMandu
३० पुष २०७५, सोमबार १६:३८
नहोला सँगै आज त र म
तर तेरो संझना यो मनमा छ
साथ छोड्ने छैन भन्थौ कहिले
तर साथी निकै एक्लो छु अहिले
उस्ले एकदिन चुरोट सल्कायो अनि सोध्यो ए खाने
मैले पनि एकफेर खुरुखुरु ताने भन्ने गीतवाट चुरोट अनि लागुऔषधसम्मको सम्बन्ध पनि यम बुद्धले ब्याख्या गरेका थिए । यिनले आफैं आत्महत्या जस्तो निर्णय लिनेहुन भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । यम बुद्ध बरु एउटा उत्प्रेरक अनि कुशल यूवा नेतृत्व र आवाजका रुपमा स्थापित नै भइसकेका थिए । दुखको कुरा त आज यमले संसार छाडेको २ वर्ष भइसकेको छ । यी आशालाग्दा अनि प्रेममयी वाक्याशंहरु यम बुद्ध अर्थात अनिल अधिकारीका र्यापबाट साभार गरिएको हो ।
जित्नु ठुला कुरा हैन
प्रयास गर्नु ठूलो कुरा हो
झम्सीखेल काठमाण्डौ को भित्रपटी नेपाली सेनाको प्रमुख बस्ने स्थानको मुख्य द्वारभन्दा अलिक पर अहिले एउटा मार्ट भएको ठाँउमा सन् २००८ ताका एउटा पोर्चुगिज रेष्टुरेन्ट थियो, पेरि पेरि नाम गरेको । दिनविशेषमा त्यहाँ आँगनमा उभिएका युवायुवतीहरु अनि क्यामरा र तालीगालीहरुको गड्गडाहट हुने गर्दथ्यो । यम बुद्ध त्यस हुलमा सदैब एउटा टोपी लगाएर उभिरहेका देखिन्थे । कति र्यापरहरुले उन्लाई र्यापकै क्रममा उडाँउथे अनि उदृत पनि गर्दथे । त्यही माहोल अनि रेष्टेराँको आँगनमा हुने गर्दथ्यो, र्याप ब्याटल । यिनै यम बुद्ध लगायतका केही अंगे्रजी र्यापरहरुले यो प्रथाको शुरु गरे अनि र्याप अर्थात एउटा नयाँ खाल्को लयात्मक दोहोरी शुरु भयो । आज र्याप संगीतले अनि गायनले नेपालमा एउटा सांगिति अभिव्यक्तिको निकै ठूलो क्रेज बनाइसकेको छ अनि जबजब नेपाली र्यापको कुरा हुन्छ तबतब यम बुद्धको छवी नेपालीहरुले संझना गर्दछन् ।
र वार्सको ति ब्याटलका भिडियोहरुले यू ट्यूबमा पनि निकै चर्चा कमयो, केही अन्य कलाकारहरु, आशिस राना(लाउरे) ,वालेनस, यूनिक पोयट अनि थुप्रै प्रतिभावान नामहरु त्यहीसाथ जोडीन पुगे । यो पंक्तिकार पनि गोडा दुई र्याप ब्याटलमा सहभागी भएको छ, मलाई त बहुतै खतरा लाग्ने थ्यो ति जमात । एकैछिनमा पटट अंग्रेजीमा घट्याउने साथीले अर्को पंक्तिमै मौलिक नेपाली घरआँगनका कुरा अनि लयहरु फाल्दथे । मानौं त्यो आवाज हैन रकेट हो जतापनि उड्न सक्छ ।
शब्दको रेस्लिगं जस्तो, बाद बिवाद अनि शाब्दिक झगडा तर रमाईलो । केही अश्लिल कुराहरु पनि समावेश हुन्थे ति शब्दहरुमा तर युवा पुस्तालाई पाच्य थियो । यम बुद्धलाइै उत्ति धेरै र्याप ब्याटलमै उत्रेको भन्दा पनि रेकर्डेड गीत अनि र्याप मार्फत धेरै चिनियो, साथी वोलको गीतले त एकफेर नेपाल हल्लाएको थियो । एउटा साथीकालागी अर्को साथीले गाएको गीतमा कुलतमा फसेको साथीको मृत्युको खबर उस्को भाईमार्फत पाएको यो सन्देशमुलक गीतका रचयता आफैले आत्महत्या गरे भन्ने कुरा चाँही सहजै पाच्य थिएन्, तर विधीको विधान यम वुद्धले संसार छाडेर गएको नै आज २ वर्ष भइसक्यो ।
केहिवर्षअघि एकजना श्रीलंकन संगीतकर्मी सित नेपाली संगीतकर्मीहरु गायीका ईन्दिरा जोशी, यम बुद्ध अनि किचामान चित्रकारहरु मिलेर केही भारतिय कलाकारका साथमा विभिन्न श्रृजनाहरु युट्युब मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएकोमा यम बुद्ध आफैले पनि आफ्नो खतरा नामक सांगीतिक एल्बमको तैयारी गर्दै थिए, नेपाली हजार रुपैयाको नोटमा खतरा लेखिएको एल्बम कवर उन्ले आफ्नो फेसबुकमार्फत शेयर गरेका थिए तर खतरा अब एउटा ईतिहास भयो जब रचेता आफैले खतरा निर्णय लिईदिए । यम वुद्धले लिएको खतरा निर्णयले धेरैको आँखा रसायो र उन्को खतरा एल्वम खतराका साथ आएन । उन्को नाम अघि स्वर्गिय जोडिएर आँउदा अझै पनि पत्यार नलाग्ने धेरैलाई हुन्छ तर यथार्थ यहि हो । ३० मे १९८८७ मा धनकुटाको लेगुवामा जन्मिएका अनिल अधिकारी र्याप अनि हिपहप संगीतमा रुची राख्थे, आफ्नो नाममा बुद्ध जोडेर यम बुद्ध भएका यिन्ले २०१७ जनवरीको १४ तारीखमा वेलायतको लन्डनमा आत्महत्या गरे भन्ने सुनियो, शुरुमा त यो खबर झुठो हो भनेर हामीमध्य धेरैलाई पत्यार लागेन तर सत्य त्यही थियो ।
सुप्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकर्मीहरु कर्ट कबिन, जिम मोरिसन्, एमी वाईनहाउस जस्ताहरुले आफ्नो अत्यन्त चर्चा अनि नामका वावजुत पनि २७ वर्षमा आत्मदाह गरेका छन्, यस्ता करिब आधादर्जन भन्दा धेरै नामले क्लब २७ भन्ने एउटा सर्जकको श्रदान्जलीजस्तो भनाईहरु संसारभरि लिईने गर्दछ । आखिर के नपुगेर या नभएर जिवनलाई सहजै त्याग गरिदिन्छन् यी सर्जकहरु ? विषय गहन छ । सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा नेपालले सुनील वर्देवालाई गुमायो । यो पनि एउटा आत्महत्या झैं थियो, उन्का निकट रहेकाहरुले अत्याधिक मदिरा सेवनले वर्देवाको मृत्यु भएको बताए। शायद वर्देवाले विदा माग्नै यसो गरेका थिए । नत्र केही वर्षऋघि उन्लाई भेट्दा उनी विल्कुलै क्लिन अनि मादक पदार्थ छाडेका थिए । तर फेरि उन्को जीवनमा आएको केही अवरोहले उन्लाई केही वर्षको अन्तरालमै संसारवाट विदा गरायो । बेलायतबाटै संगीत पढेर नेपाल आएका अर्का एक होनहार गायकलाई पनि नेपालले गुमाएको थियो, लगभग एक दशक अगाडी । कुल पोखरेल, उन्का श्रृजनाहरु दशक भन्दा पुराना भएपनि अझै पनि अत्याधुनिक तर मौलिक छन् चाहे त्यो दशैमा जिन्सको प्यान्ट ल्याउने दाईको कुरा होस् या अहिले हैन विहेपछी मात्रै गरौला भन्ने भाव होस् ।
नेपालमा विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम अनि उत्सवहरुमा सामान्य पहिरनमा हातमा छड्के माईक लिएर उभिन्थे, यूवाजमात कराउथे, यम वुद्ध भन्दै । उनिसँगै उन्का गीतहरु गाँउथे, माहौल बनाउने सरल मान्छे थिए यम बुद्ध । सन् २०१४ को अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसमा जमलको नाट्यघरमा यम वुद्ध माइक् समातेर आँउदा नेपाल भरिका युवा प्रतिनितिहरु उन्को समर्थनमा हुटिगं गर्न थालेका थिए । उन्का गीतका पंक्तिहरु अक्षरस सबैलाई याद भएको जस्तो थियो ।
चेलीवेटी वेचविखनका विरुद्ध उन्ले तैयार गरेको गीत अनि त्यस्को मनैछुने भिडियो, यम बुद्धले एकहिसाबमा अरुहरुको पिडालाई घोलेर गीत गाए तर आखिर कस्तो पिडा थियो उन्मा कि अन्तमा आँफैले आफूलाई सकाईदिए ? यम बुद्ध ले अब गाउने छैनन् त्यो सत्य हो तर उन्का गीत मार्फत उनि हामी विच सदैव जिवितै रहनेछन् त्यो झन ठूलो सत्य हो ।
स्वर्गमा वास होस्, यम बुद्ध
मान्छेको जीवन सपना नै हो कि जस्तो लाग्छ ।
सपना अनि सपनाको खात झैं ।
आउनुहोस् यम बुद्धलाई पनि संझना गर्दे साकारले गाएको यो सबै सपनानै हो कि भन्ने गीत पनि हेरौं ।